Home News Sababtii loo Fur-furay Mooshinkii Waare oo la shaaciyay
Xildhibanada Baarlamanka Maamulka Hirshabeele aya dhawaan mooshin ka gudbiyay madaxweynaha Maamulkasi Maxamed Cabdi waare.
Mooshinkaan aya waxa si deg deg ah ugu laabtay Xildhibanada Maamulkasi kadib kulan uu la qaatay Madaxweynaha Maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare.
Xildhibaan Maxamed Bashir Qaasim daqare oo ka mid ah xildhibanada maamulka Hir shabeele oo wareeysi gaar ah siiyay radio Maanta aya ka hadlay sababaha keenay in Xildhibanda maamulka Hirshabeele ay dib ugu laabtaan mooshinka madaxweyne waare.
Xildhibaan daqare aya sheegay in talo ka imaaday Dowlada Dhexe ee Dalka iyo balan qaad aha in la xalin doono tabashadooda ay keentay inay dib ula laabtaan Mooshinkooda.
Waxaa kale oo uu sheegay in mooshinkoodu uu aha inay wax hagaajiyaan,hadii ay markale arkaana qaladaad la mid ah midkii hada in ay markale keeni doonan mooshin.
Mooshinka madaxweyne waare aya kuso adaya xili ay Xildhibaanada maamulka Hirshabeele ay wali ka cabanayaan wax ka qabasho la’aanta balanqaadyadii uu horay u balan qaday,iyo amaanka deeganada maamulkaasi oo an hagaagsaneen.
Previous articleRW Kheyre oo maanta ku wajahan dalka Boqortooyada Sucuudiga. (Warbixin)
Next articleCiidamada Jubbaland oo ku Wajahan Degmada Jamaame Ee Gobolka Jubadda Hoose
Saraakiil Katirsanaa Ururka Al Shabaab Oo Ku Dhintay Duqeeyn Ka Dhacday...
Dhuusamareeb oo laliic-liicaysa Ciidamadii ugu badnaa abid iyo Shacabka Galmudug oo...